ပြည်သူ.မီဒီ.ယာသမားတွေနဲ. ၈၈ မျိုးဆက်က ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်ကြပြီ==================================================“မွေးစားသမီးကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာ အဖြစ်ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ လွှတ်တော်က ဗိုလ်မှုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထဲက အမှု”====================================================ဒီအမှု့ကိုပြည်သူအများစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဒီအမှု့ဖြစ်စဉ်ရဲ့အစကတော့ Facebook အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစည်သူက သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်အကောင့်ကနေ ကလေးငယ် မစုဝေ ကိုကြိုးတုတ်ပြီးရိုက်နှက်နေတဲ့ပုံကို Facebook ပေါ်တင်ခဲ့ရာမှ လူအများစိတ်ဝင်စား လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ၈၈ မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ မမီးမီး ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကလေးငယ်မစုဝေ ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ နဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။ဘိတ်မြို့နယ်က စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာ တပ်ရင်း ၉၁၈ က မစုဝေရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ ရဲဘော်သန်းဦးရဲ့ညေပာကြားချက်အရ သမီးဖြစ်သူ မစုဝေကို ၂၇ .၉ .၂၀၁၅ နေ့ကတည်းက ဗိုလ်မှူးကျော်နုမော် တို့လင်မယားကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့မွေးစားဖို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကျော်နုမော် တို့လင်မယားက မစုဝေရဲ့မိဘများကို လူမှု့ရေးအရသနားညာတာသောအားဖြင့် ငွေဆယ်သိန်း ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဗဟန်းရဲစခန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့သလို အိမ်ဖော်ဒေါ်သန်းသန်းနွဲ့ နှင့် တူမတော်စပ်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမှားယွင်းနေပါတယ်။
မစုဝေရဲ့အဓိကအုပ်ထိန်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းရဲ့ဒီအမှု့ ကိုင်တွယ်မှု့ပုံစံဟာ တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကလေးငယ် နှိတ်စက်ခံနေရတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာ တတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းလေးရက်ကျော်ကြာတဲ့အထိမည်သူတစ်ဦးတယောက်ကိုမှ အရေးယူခြင်း အမှု့ဖွင့်ခြင်းတစ်စုံတရာမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု့တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးမှလည်းဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်လို့မီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာကျမတို့မြင်တာက မမီးမီးလို ဘာ အာဏာဘာရာထူး ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့် မှမရှိတဲ့သူတွေက ဒီကလေးလေးရဲ့ မိဘတွေကိုရအောင် ဆက်သွယ်ပြီး ကလေးကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့မွေးစားခဲ့တယ် ဆိုတာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရဲ့အိမ်မှာ ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးလေး တစ်ယောက်လူမဆန်စွာ နှိတ်စက်ခံနေရတာကို နှောက်နှေးစွာလုပ်နေတာဟာ အိမ်ရှင်ကတပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတာကြောင့်လားဆိုတာက စဉ်းစားစရာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု့ဟာ နေ့ခင်းဘက်နေရောင်အောက်မှာတောင် မီးထွန်းပြီးရှာ ရလောက်အောင်ကိုခက်ခဲနေပါတော့တယ် ။
Police investigatePolice investigate Facebook child abuse Investigators raidedahouse belonging toamilitary MP on Thursday in response toaviral Facebook post alleging child abuse.Bahan Township police and Child Protection Service officers twice visited the uptown estate in Sayasan Ward on University Lane, Bahan Township, Yangon.The Facebook post showed photos ofachild in her underwear about to get tied up witharope byawoman.Yin Yin Nwal, wife of the military representative, reported that the eight-year-old child was hired help around the house and her young daughters’ friend.She said that the woman in the picture was the victim’s aunt, Than Than New, adding that the pair had had left Yangon for Taungoo half an hour after the police arrived in the morning. Yin Yin Nwal apparently said: “If the police are involved in her disciplining her niece, matters will only get messy.”Yin Yin Nwal claimed that she did not know the Taungoo address.“The child stole food and drank from bottles off limits to her. She also did not wash her hands so her aunt beat her in many different ways. I asked her to not go overboard and asked her to punish her by doing squats instead. The child was afraid so she begged her aunt not to beat her but tie her up so the aunt agreed. The clothes were dirty and, according to the aunt, the child could not wash the clothes before mopping the house so she asked the child to take off her clothes,” said Yin Yin Nwal.The military MP, owner of the estate, also said that the little girl ran away, locked herself in the bathroom and then proceeded to hide in the compound, because she was afraid of being beaten.A neighbour said that he took the photos and contacted Bahan police, although he denied uploading them to Facebook.He said: “They have been torturing the poor girl for around 20 days. Their methods are cruel. They should give her appropriate jobs for her age. There are injuries all over her body and she might be traumatised as she is still so young.”The authorities are looking for the pair. CR. ELEVENMYANMAR